मनाेरञ्जन Archives - Saptakoshionline
प्रकास सुब्बाको लेखन तथा निर्देशन रहेको चलचित्र मिराजको प्रोमो युटुवमा सार्वजनिक
इटहरी । पुर्वका चर्चित कलाकार प्रकास सुब्बाको लेखन तथा निर्देशन रहेको चलचित्र मिराजको प्रोमो युटुवमा सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालीहरुको महान चाँड दशैको अवसर पारेर रिलीजको तयारीमा रहेको मिराजको प्रोमो युटुव मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । योगिराम फिल्मसको दोस्रो प्रस्तुतिका रुपमा निमार्ण भएको मिराजमा कलाकार तथा निर्देशक प्रकास सुब्बाले दोहोरो भुमिकामा देखा पर्ने छन । सानो बालकको भुमिकाका लागि सुब्बाल...
बुढीगंगा सहकारीको तिज विशेष सास्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न
सुन्दरहरैचा, मोरङको सुन्दरहरैचा ४ मा रहेको बुढीगंगा बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाले तिज विशेष सास्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । अहकारीमा रहेका शेयर सदस्यको ५०% भन्दा बढी महिला शेयर सदस्य रहेको उक्त सहकारीले सुन्दरहरैचा ०४ स्थित बासबारीमा उक्त कार्यक्रम गरेको थियो । सुन्दरहरैचा नगरपालिकाकी उपमेयर धनमाया तमाङअको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा सभाध्यक्ष कार्यक्रम संयोजक तारा दाहालको...
कलाकारहरु भन्छन: वर्तमान सरकार जनताप्रति संवेदनशील छैन
काठमाडौ, गाईजात्रा पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ख्यातिप्राप्त हाँस्य कलाकारहरुले देशको पछिल्लो घटना र सन्दर्भलाई लिएर झटोरो हानेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ३१ साउनमा गाइजात्रा विशेष साक्षात्कारमा सहभागी भई उनीहरुले नेतादेखि कर्मचारीसम्मलाई व्यङ्ग्यमार्फत् झटारो हानेका छन् । हास्यकलाकारहरुले नेताका व्यवहार, शैली र प्रवृतिलाई आफ्नो व्यङग्यका निसाना बनाएका छन । देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, ब...
चाहना, संघर्षता र सफलता एकअर्कासँग जोडिएका शब्दहरु हुन् । व्यक्तिले चाहना गर्नुपर्छ लगभग लगभग पुग्छ । तर त्यहाँ बीचमा संघर्षको कमि भने किमार्थ हुनु हुन्न । देख्नेका मात्र सपना पुरा हुन्छन् भन्छन् नि, सायद त्यस्तै होला । हुन पनि, सपनै नदेख्ने हो भने कसरी पुरा होस् । यतिबेला हामी मोरङ उर्लाबारीका निश्चल नेपालको प्रशंग जोड्दैछौं । जसको सानैदेखिको सपना नेपाली कला, संगीत र संस्कृतिसँग जोडिएको थियो । ...
बिराटनगर, रुखबाट लड्दा छातीमा गाडिएर मुटुसम्म पुगेको बाँसको भाटो सफलतापूर्वक निकालेर नोबेल शिक्षण अस्पतालले एक बिरामीको ज्यान बचाएको छ । मोरङको पथरीशनिश्चरे–१ मुन्धुम चौककी ३८ बर्षीया लक्ष्मी पोख्रेलको छातीमा गाडिएको बाँसको भाटो नोबेलले शल्यक्रियाको माध्यमबाट सफलतापूर्वक निकालेको हो । आँप टिप्न रुखमा चढेका बेला हागो भाचिएर लड्दा उनी बाँसको चोकेमा परिन् । छातीमा गाडिएको बाँसको भाटो मुटुसम्म पुग्...
काठमाडौ, नायीका सम्राज्ञीको हातमा हतकडी लागेको छ । प्रेम कथामा आधारीत रहेर बनेको चलचित्र मारुनीको छायान्कन गर्ने क्रममा नायिकाको हातमा हतकडी लागेको दृश्य कैद गरिएको थियो । उनको हातमा भने रियल लाइफमा हतकडी लागेको हैन । चलचित्र मारुनी’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा पुष्प खड्का र सम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहको अभिनय रहेको छ । नवल नेपालको निर्देशनमा बनेको यस चलचित्र भदौ १३ गतेबाट प्...
मंगलबार, साउन २१, २०७६
विराटनगरमा गाई जात्रा साउन ३१ गते, राष्ट्रिय स्तरको कलाकारको प्रस्तुती रहने
काठमाडौं केन्द्रित गाई जात्रा यस वर्ष प्रदेश नम्बर एकको राजधानि विराटनगरबाट सुरु हुने भएको छ । ब्रान्ड वर्थ प्रालीले यस वर्ष प्रदेश नम्बर एक हुदै सातै प्रदेशमा गाई जात्रा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो । साउन ३१ गते बाट सुरु हुने गाई जात्रा कार्यक्रमको नाम ‘सिग्नेचर प्रदेश प्रदेशमा गाई जात्रा’ दिइएको छ । । विराटनगर बाट सुरु भइ उक्त गाई जात्रा कार्यक्रम धनगढी , सिमरा, हेटौंडा, सुर्खेत, बुटवल,...
मन्त्री भट्टराईले दिए ‘मिष्टर वल्र्ड २०१९’मा सहभागी हुन लागेका अक्षयलाई बधाई
काठमाडौं , संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै ‘मिष्टर वल्र्ड २०१९’मा सहभागी हुन लागेका अक्षय रायमाझीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा भेट गर्दै मन्त्री भट्टराइले ‘मिस्टर वल्र्ड’ नेपाल चिनाउने एउटा महत्वपुर्ण प्लेटर्फम भएको बताए । उनले उक्त मन्चबाट भिजिट नेपाल २०२०को सन्देश समेत प्रवाह गर्दै नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिन अक्षयल...
सोमबार, साउन २०, २०७६
प्रदेश १ स्तरिय मिसेस तिज २०७६ इटहरीमा हुने
इटहरी । सुनसरीको इटहरीमा रहेको द बिहानी डान्स सेन्टरको आयोजनामा तिजको बिशेष अवसर पारेर महिलाहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने उद्धेश्य सहित प्रदेश १ स्तरिय मिसेस तिज २०७६ आयोजना हुने भएको छ । २०७४ साल बाट सुरुवात भएको उक्त प्रतियोगिताको तेश्रो सस्करणको रुपमा यहि भद्र १२ गते इटहरीमा प्रतियोगिता हुने द बिहानी डान्स सेन्टरी सञ्चालीका प्रनिसा उदासले जानकारी दिईन । बिवाहित महिलाहरुको लागी मात्र हुने उक्त प...
सुन्दरहरैचा, माेरङकाे सुन्दरहरैंचा स्थित सुकुना मा.वि. मा अध्ययानरत छात्रहरु एक्रेटिभ मिडिया प्रा. लि काे आयोजनामा इटहरीमा संचालन भएको क्वीज मेनिया सिजन ७ वल्ड वाइटमा प्रथम भै प्रदेश १ बाट छनाेट हुन सफल भएका छन । महानायक राजेश हमाल क्वज मास्टर रहेको साे कार्यक्रममा जम्मा ६६ जाना समूह सहभागी थिए । सुकुना मा.वि. बाट १२ जाना विद्यार्थी सहभागि भएकोमा २/ २ जनाकाे गरि ६ समुहले क्वीजमा भाग लिएकाे थिया...